व्यक्ति व्यवस्थापन र स्वार्थले फेरि बल्झिँदै नेकपा विवाद « Naya Bato
व्यक्ति व्यवस्थापन र स्वार्थले फेरि बल्झिँदै नेकपा विवाद
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको निर्णय थियो । सरकार र पार्टीका कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा सचिवालयको सहमति हुनुपर्ने ! तर, सो निर्णयको मसी नसुक्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानै शैली देखाउन थालेपछि नेकपामा विवाद बढ्ने संकेत देखिँदैछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव, डा. युवराजलाई खतिवडा अमेरिकाका लागि राजदूत, लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई नियुक्ति सिफारिस गरे। खासै नाम नसुनिएका निर्मल विश्वकर्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट खाद्य सुरक्षा र समावेशी विषयमा विद्यावारिधी गरेर डिएफआइडी र जिटिजेड लगायतका संस्थामा डेढ दशक जागिर खाएका व्यक्ति हुन्‌। अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको खतिवडा निवर्तमान अर्थमन्त्री हुन्।
यस्तै, रेग्मीलाई मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएलगत्तै ओलीले राजदूतमा सिफारिस गरेका हुन्‌।​प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा कुरा मिलि नसक्दै ओलीले एकलौटी रूपमा राजदूत सिफारिस गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा ओलीसँग अध्यक्ष दाहाल गत बिहिबारबाट निरन्तर वार्तामा थिए। तर, सहमति बनिसकेको थिएन। यही विषयले प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्‌।
व्यक्ति र उनीहरूको स्वार्थ व्यवस्थापनका कारणले पार्टीहरू पटक-पटक विवादमा फस्ने गरेको छ। ‘सबै व्यक्ति व्यवस्थापन र व्यक्तिको स्वार्थमा केन्द्रित भएका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि सबै कमजोर छन्। पार्टी मजबुद छ, कार्यकर्ता मजबुद छन्, नागरिक कमजोर छन्। सरकार र पार्टी नेतृत्व कमजोर भएकै कारणले नागरिक कमजोर भइरहेका छन्।’